के फेरि लोडसेडिङ हुन सक्छ ? यसो भन्छन् कुलमान घिसिङ (अन्तर्वार्ता) - Everest Dainik - News from Nepal
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निर्देशक कुलमान घिसिङको कार्यकाल सकिएको छ । जनस्तरमा कुलमानलाई पुनः नियुक्त गर्नुपर्ने चर्को आवाज देखिएपनि सरकारले भने यो विषयमा कुनै निर्णय गरेको छैन । कतिपयले कुलमान नहुँदा लोडसेडिङ फेरि हुने पनि आशंका गरेका छन् । के उनी नहुँदा लोडसेडिङ हुन्छ त ? कसरी गर्छन उनी आफ्नो कार्यकालको मूल्यांकन । बिबिसी नेपालीमा प्रकाशित सामग्री यहाँ साभार गरिएको छ ।
याे पनि पढ्नुस विद्युतभार कटौतीको अन्त्य सरकारको योजनामै भएको हो : कुलमान घिसिङ
ट्याग्स: kulman ghishing, कुलमान घिसिङ